चर्चित जापान का'ण्डलाई उजागर गर्ने शाहसी तथा निडर पत्रकार गंगा लामाले पत्रकारहरूमाथि नै गरीन् गम्भीर प्रश्न र ल्याइन् अर्को अपडेट,उनी भन्छिन्,”ज्यान गए नि छाड्ने छैन यो केशलाई,पीडितले न्याय नपाएसम्म लडिरहनेछु”(भिडियो हेर्नुहोला) - Nawalpur Dainik
चर्चित जापान का’ण्डलाई उजागर गर्ने शाहसी तथा निडर पत्रकार गंगा लामाले पत्रकारहरूमाथि नै गरीन् गम्भीर प्रश्न र ल्याइन् अर्को अपडेट,उनी भन्छिन्,”ज्यान गए नि छाड्ने छैन यो केशलाई,पीडितले न्याय नपाएसम्म लडिरहनेछु”(भिडियो हेर्नुहोला)
April 10, 2021 by Nawalpur Dainik
पत्रकार गंगा लामालाई प्रश्न गर्ने क्रममा हातपात गर्नु भनेको सिंगो पत्रकार जगतलाई नै हातपात गरिएको छ तर यस्तो अवस्थामा पनि प्रश्न गर्ने दम किन राख्नु भएन ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन्। पिडीतहरू यति धेरै प्रमाणसहित आउनुभएको छ,के त्यी पीडितहरूको कुरा तपाईंहरूको मिडियामा आँटेन ? तपाईंहरूको मिडिया कस्तो खालको मिडिया हो ? तपाईंहरू केका लागि पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै गम्भीर प्रश्नहरू तेर्स्या’एकी छिन्।
केही समय अघि निकै चर्चित बन्न पुगेको जापान का’ण्डकी मूख्य योजनाकार कमला भण्डारीअहिलेसम्म पनि खुलेहाम हिँडिरहेकी छिन्। उनलाई पक्रन पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा समेत जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशले नै फौजदारी कसुर भन्दा बाहेक अरु विषय लिएर पक्राउ नगर्नु भन्ने आदेश आएपछि यो केशले गति लिन नसकेको देखिन्छ।
कमला भण्डारी पिडीत समूह धेरै भैसकेपछि र पिडीतहरू पटकपटक सम्बन्धित निकायमा गएतापनि न्याय नपाएपछि मिडियासमक्ष गएका थिए। पत्रकार गंगा लामाले स्टि’ङ अप’रेशनका क्रममा उनी बस्ने घरमै उनीद्वारा पिडीतहरूको समूह लिएर पुगेकी थिइन्।
त्यो बेला उनी कुखुरा फममा भेटीइन् र उनको हात भाँचिएको रहेछ त्योबेला। उनले त्यसबेला मिडिया पत्रकारमाथि अपशब्द समेत बोलिन् र पत्रकार गंगा लामा प्रती हातपात समेत गरीन्। यद्यपि लामाले उनलाई पक्राउ गर्न भनेर प्रहरी समक्ष लगीन्। तर त्यो बेला उनलाई तत्काल पक्राउ नगर्न जिल्ला न्यायाधीशबाटै आदेश आएको त्यहाँ स्थित प्रहरीले जनाएको थियो।
पिडीतहरू अहिले पनि आउने क्रममा जारी नै छ। उनले जापान लैजान्छु भनेर पैसा उठाउँदै बर्षौँ झुलाउने गर्दै आएकी रहेछिन्। साहुसँग रिण काडेर लगेको पैसा यसरी लामो समयसम्म झुलाइदिँदा पिडीतहरू झन् पिडीत हुँदै गइरहेका छन्। न्याय पाउने ठाउँबाट पनि आश मर्दै गएपछि उनीहरू मिडिया समक्ष आफ्नो पीडा लिएर आउन थालेका छन्।
प्राप्त जानकारी अनुसार उनी ( कमला भण्डारी) यतिबेला खुलेहाम हिँडिरहेकी छिन्। उनीद्वारा अर्का पीडित चितवन गैंडाकोटका सुरज चन्द्र घिमिरे यतिबेला आफू ठगीएको आरोप प्रमाण सहित आउनुभएको छ। उहाँसँग पनि जापान लगिदिन्छु भनेर होटलमा काम गरेको नक्कली कागज बनाएर ठगिनुभएको रहेछ। उहाँले आफूले दुईलाखको चेक काटिदिएको भन्दै प्रमाणसहित आउनुभएको थियो। कृपया यो भिडियोलाई पूरा हेर्नलाई तलको लिंकलाई क्लिक गर्नुहोस्।
Prevचैत २९ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Nextहिम्मतवाली र सहाशि हावामा उड्ने नेपालि चेली, सबै लाई चकीत पर्दै नेपाली चेली चन्द्रकला, क्षमता देखियो यस्तो